Ungachinja sei nhare mbozha muWhatsApp pasina kurasikirwa nechinhu | IPhone nhau
Ungachinja sei nhare mbozha muWhatsApp pasina kurasikirwa nechinhu
Unochinja yako nhare mbozha? Zvakanaka unofanira kuziva izvozvo unogona kuchengeta ese ako WhatsApp machats uye mapoka, uye zvakare otomatiki kuzivisa vese vaunosangana navo nezve shanduko yenhamba yefoni. Isu tinotsanangura kuti sei mune ino vhidhiyo uye chinyorwa.
Yedu WhatsApp account inosanganisirwa nenhamba yedu mbozhanhare, asi kana tikachinja nhamba yedu chero nguva hatifanire kunetseka nekuti tinokwanisa kuchengeta yedu yese WhatsApp yekukurukurirana nemapoka, zvese zvirimo zvemultimedia, uyezve hatifanire kunetseka nezvekutaurirana kune vese vatinoshamwaridzana navo nezvekuchinja kwenhamba nekuti WhatsApp inokuzivisa iwe otomatiki. Ungazviita sei? Zvakanaka, sarudzo yekuti chishandiso icho chinotipa, uye isu tinotsanangura danho nedanho kuti zvinoitwa sei zvakadzama.
1 Chinja SIM
2 Shanduko yenhamba
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kushandura iyo SIM ye iPhone yedu kune iyo nyowani. Usazvidya moyo, hapana chichaitika neWhatsApp yako kunyangwe usati waita kuti nhamba ichinje. Bvisa iyo SIM yekare, isa iyo SIM nyowani nenhamba nyowani yefoni, uye ita shuwa kuti iri kushanda, kuti une kufukidzwa neako opareta uye kuti iko kuita kweSMS kwakaitwa pasina matambudziko. Kana izvi zvangoitwa, iwe unogona kuenderera kunhanho inotevera.
Iye zvino tinogona kupinda WhatsApp uye nekuwana iyo "Zvirongwa> Akaundi" menyu uye kubva ipapo pinda iyo "Chinja nhamba" sarudzo. WhatsApp ine basa rekutiyeuchidza kuti isu tinofanirwa kuve neiyo Sim itsva yakagadzirira kugamuchira SMS, uye mune inotevera nhanho isu tichafanirwa kuisa iyo yekare nhamba uye iyo nyowani nhamba. Dzvanya pa «Inotevera» uye ikozvino tichava nesarudzo yekuzivisa vatinoshamwaridzana navo nezve shanduko yenhamba. Izvo ndezvokusarudza, kana iwe usingadi iwe haufanirwe kuimisa, asi kana iwe ukaimisikidza iwe unogona kusarudza kuzivisa vese vaunofambidzana navo, chete avo vauinawo mune chat kana kugadzirisa zviyeuchidzo. Ndiani achazogara achiziviswa achave iwo mapoka maunosanganisirwa.
Kana izvo zvangoitwa, maitiro acho anenge apedzwa uye isu tinogona kungosimbisa kuti iyo nhamba yatakawedzera ndiyo chaiyo, chimwe chinhu chakakosha nekuti Tichagamuchira SMS ine kodhi iyo ichave yakakosha kuti tikwanise kupedzisa shanduko yenhamba mbozha yeakaundi yedu yeWhatsApp. Mushure meizvozvo tichava nematauriro edu nemapoka neese maonana navo uye zvemukati, sezvavaivepo nhamba isati yachinja, uyezve (kana isu tavhura sarudzo) vatinosangana navo vachaziviswa nenhamba nyowani yatinayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Ungachinja sei nhare mbozha muWhatsApp pasina kurasikirwa nechinhu
Maka Gurman Anoti Chiitiko chaApple Hachizove Kurume 16
Ndozvakaitawo AirPods 3, dhizaini uye maficha